အောင်လွန်းမြိုင် ● ကဗျာဆရာ့အဖေ ပန်းပဲဆရာကြီး | MoeMaKa Burmese News & Media
အောင်လွင် ( ကံပေါက်သား ) - ငါးရံ့တစ်ကောင်ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ
ညိုမှိုင်း​ဝေ(သနပ်ပင်) - တိမ်​အပြန်​လမ်း
လွင် (ဘော်တွင်း) ● အိမ်ပျောက်သူ
နေနေ ● ကျူးကျော်ရန်စတဲ့ကောင်
ဝေမြင့်မောင် ● မွေးမြူရေးမှတ်တမ်း [ 1995 - 2017 ]
မင်းကိုနိုင် ● လဝန်းမျက်နှာ ကြည့်တိုင်းသာ
မြဇင်ယော် ● ငါ့ဝမ်းမနာ သားသက်လျာ
အဖေက သံပြားဂေါ်နဲ့ မီးသွေးမီးဖိုကို ဖြဲကြည့်လိုက်၊ မီးသွေးထည့်လိုက်၊ သံတုံးကို လှည့်ပေးလိုက်၊ ရေနွေးကြမ်းသောက် လိုက်၊ ခဏနေတော့ ပန်းပဲဖိုရဲ့ဘေး ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာ အနားယူနေတဲ့ အမျိုးသားကြီးသုံးယောက်ကို ”ရပြီဟေ့ လာကြ” ဆိုပြီး အဖေရဲ့ခေါ်သံအဆုံးမှာ အမျိုးသားကြီးသုံးယောက်က ဟင်္သာပေတုံးဘေးမှာ အသင့်ထားတဲ့ ဆယ်ပေါင်တူ သုံးလုံးကို တယောက်တလုံးကောက်ကိုင်ပြီး ရန်သူကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ကြမယ့် လက်မရွံ့တပ်သားတွေလို။ အဖေက မီးသွေး မီးဖိုထဲက သံချောင်းတုံးကြီးကို တဖက်အဖျားကနေ ဂုန်နီအိတ်အစတွေနဲ့ ပတ်ကိုင်ကာ ဟင်္သာပေပေါ် မရွေ့တင် လိုက်တော့ အလျှံရဲရဲနီနေတဲ့သံတုံးကြီးကို လက်မရွံ့ တပ်သားသုံးဦးက တယောက်ချင်းစီ စည်းချက်ညီညီ ထုရိုက်ကြတော့သည်။ အဖေက သံချောင်းတုံးကြီးကို လိုသလိုလှည့်ပေးလိုက် ရှေ့ထိုးပေး နောက်ဆွဲပေး၊ တူထုနှက်သံက မြေပြင်ထိအောင်တုန်ခါပြီး ဒိန်း ဒိန်း ဒိန်း နဲ့ သံချောင်းတုံးကြီး မီးညိုသွားတော့ မီးသွေးမီးဖိုထဲ ပြန်ထည့် ဖိုဆွ မီးသွေးထည့်၊ လက်မရွံ့တပ်သားသုံးဦးလည်း ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ပုဆိုးနဲ့ ချွေးသုတ်သူ သုတ်၊ ရေနွေးကြမ်းသောက်သူ သောက်၊ ပန်းပဲဖိုလေး တဲအပေါ် အုံ့မိုးထားတဲ့ ညောင် ပင်ကြီးက အမှောင်ထဲမှာမအိပ်သေး ညောင်ရွက်အချင်းချင်း စကားများလို့၊ အဖေနဲ့အတူ သူ့တပည့် လက်မရွံ့တပ်သား သုံးဦးလည်း ဖိုထိုးလိုက်၊ မီးသွေးထည့်လိုက်၊ ထုလိုက် ရိုက်လိုက်နဲ့ ညဉ့်နက်တော့ မီးသွေးမီးတွေ ရေဖြန်း အနားယူကြတော့ သည်။
အမွေ … ။
အဖေပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကားတခွန်းကို အရိုးထဲစွဲနေအောင် မှတ်သားခဲ့ရသည်။ ”လုပ်ငန်းဆိုတဲ့အတိုင်း ငမ်းမှရတယ်ကွ” တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဖေဦးဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပန်းပဲဖိုအလုပ်ကို အဖေအာသာပြေလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်၊ ကျွန်တော်တို့အဘိုးလက်ထက် ကတည်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်၊ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အလုပ်၊ မိသားစုဘဝလေး အဆင်ပြေပြေ ဝမ်းစိုစိုနဲ့သူများထက် ဘဝနေနည်း မသာတောင် တန်းတူဖြစ်ဖို့ အဖေဟာ နေ့ရောညပါ အလုပ်ကို ငမ်းခဲ့ပါသည်။ အဖေ့နှလုံးသား ချွေးစို့မှ ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းစိုခဲ့ ရတာပါလားဆိုပြီး တွေးမိတော့ ရင်ထဲမှာ ကျင်ခနဲ ဖြစ်ရပါသည်။
ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ လူလားမြောက်ခဲ့ရတာပါ။ အဖေက အလွန်အလုပ်လုပ်သူပါ။ မနက် အိပ်ရာကနေ မျက်စိနှစ်လုံး ဖွင့်တာနဲ့ အလုပ်ထဲကို ရောက်နေပါပြီ။ အဲသလိုလုပ်ငန်းကို ငမ်းလို့လည်း ရဲစခန်းနဲ့ အချုပ်ခန်းကို ရောက်ခဲ့ပါသေးသည်။ ပန်းပဲဖိုရဲ့ အဓိကကုန်ကြမ်းက သံပြားပေါက်အချပ်၊ ကားကြီးလေးသံ၊ ရထားသံလမ်းပိုင်းတွေပါ။ ဘယ်နေရာမှာရှိ တယ်ကြား တာနဲ့ သွားဝယ်ပါတယ်။ လာရောင်းရင်လည်း ဝယ်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ခိုးရာပါပစ္စည်းနဲ့ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေ …။ ထမင်းစားနေတုန်း အလုပ်လာအပ်ရင် စားနေရင်းက ဝုန်းခနဲထ လက်မဆေးဘဲ အလုပ်လက်ခံခဲ့ပါသေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းပဲဖိုတဲနဲ့အိမ်ဟာ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အစပိုင်းမှာ ကျူးကျော်မြေဖြစ်တဲ့အတွက် မြို့သစ်ကို အပို့ခံရတဲ့အထဲမှာ ပါသွားခဲ့ပါတော့သည်။ တနေရာကနေ တနေရာပြောင်းရွေ့ရင်း အဖေ အတော်ကလေးခေါင်းခဲနေခဲ့မှာ သေချာပါသည်။ မြို့သစ်ကို မပြောင်းရွေ့ဘဲ အဖေ့ရဲ့မိတ်ဆွေတဦးရဲ့ခြံထဲမှာ တဲထိုးပြီးတော့ အလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ အဲဒီတုန်းက လည်း အဖေ့ထံမှ အားငယ်စိတ်ဓာတ်ကျစရာအသံမျိုး လုံးဝမကြားခဲ့ဖူးပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း …။
အဖေနဲ့ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်း အခင်းအကျင်းကို သူငယ်ချင်းကဗျာဆရာက ”မြေးအဘိုး” ဆိုတဲ့ကဗျာလေးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မုံရွာရောက်တော့ တောင်ငူ၊ တောင်ငူရောက်တော့ မုံရွာ၊ အခေါက်ပေါင်းမနည်းတော့၊ အဖေ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပေးပါတယ်။ မုံရွာမှာ အနေမြဲစေအောင်လို့ ပျော်ရွှင်အောင်လည်း ထားပါတယ်။”အဖေ လမ်းလျှောက်ပါလား၊ လမ်းလျှောက်မှ ကျန်းမာရေး ကောင်းမှာ” လို့ ကျွန်တော်ကပြောရင် ”မလျှောက်နိုင်ဘူး လူလေးရဲ့ ကြာကြာလျှောက်ရင် အဖေ့ဒူးခေါင်းတွေ က မခိုင်တော့ဘူးကွ” လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
အဖေ့သမက် ကျွန်တော့်ယောက်ဖကလည်း ”အဖေ ဘုန်းကြီးဝတ်မလား” ဆိုပြီး မကြာမကြာ နောက်တတ်ပါသေးတယ်။
ည ၁ နာရီလောက်မှာ ”လူလေးရေ . . . သမီးရေ. . .ထပါဦး အဖေ မောလို့ပါဆိုပြီး ခြင်ထောင် ထဲကနေ ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို သားလို့မခေါ်ပါဘူး။ လူလေးလို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်၊ အဖေ့ကို ခြင်ထောင်ထဲကနေ အသာတွဲပြီး အောက်မှာ ဝါးပက်လက် ကုလားထိုင်နဲ့ ထိုင်ခိုင်းပါ တယ်။ မီးမွှေးပေး၊ နှိပ်နယ်ပေးရင်း ”ထိုင်ရတာ အသက်ရှူမဝဘူး ခြင်ထောင်ထဲ ပြန်သွားမယ် ဆိုလို့ ခြင်ထောင်ထဲကို ဖေးမပို့ပေးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ပြန်အိပ်ကြပါတယ်။ မနက်ခင်း အိပ်ရာကနိုးတော့ အဖေသက်သာရဲ့လားလို့ ခြင်ထောင်ထဲဝင်ပြီး အဖေလို့ ခေါ် ကြည့်ပါတယ်၊ ရင်ထဲမှာ ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ် ‘အဖေ’ လို့ သုံးခွန်းလောက်ခေါ် ကြည့်ပါသေးတယ်။ သေချာအောင် ပခုံးကိုလှုပ်ပြီး နှိုးကြည့်ပါသေးတယ်။ အဖေ မနိုးတော့ပါဘူး၊ အရှေ့ဘက်မျက်နှာမူပြီး ဘေးတိုက်အနေအထားနဲ့ ဒူးခေါင်းကွေးလျက် ခြုံစောင်က ခြေရင်းမှာပုံလို့။ အပေါ်နဲ့အောက် အံကပ်သွားတစုံက ခေါင်းအုံးဘေးမှာ ထွက်ကျလို့။ ကျွန်တော့်ညီမလေးလည်း အဖေ့ကို လှုပ်လှုပ်ပြီး ငိုပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာလည်း မီးသွေးဖိုထဲက အလျံရဲရဲ သံချောင်းတုံးကြီး။ ရင်ထဲမှာ တင်းကျပ်ဆို့နင့်စွာနှင့် အဖေ့ကိုပဲ သနားနေမိပါတော့သည်။
အဖေရဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့သားတွေ မြေးတွေကို အဖေ တွေ့မသွားရတာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိသည်။ ”လူလေးရေ” လို့ ခေါ်ပါဦးလား၊ အခုတော့မခေါ်နိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်တနေ့ ညနေပိုင်းမှာ အဖေ့ကို ဆားကျင်းသုသာန်မှာထားရစ်ခဲ့ပြီး၊ မကြာခင် အဖေ့ အတွက် တလပြည့်ဆွမ်းသွတ်ပြီး ကျွန်တော်လည်း မုံရွာကို ကျောခိုင်းခဲ့ပါတော့သည်။
မုံရွာ ဆားကျင်း သုသာန်ရောက်တော့ အဖေ့မြေပုံကို ရှာမရတော့။ ဟိုနားမှာလိုလို၊ ဒီနားမှာလိုလို၊ မမှတ်မိတော့ဘူး။ နှစ်နှစ် တောင် ကျော်နေပြီပဲ၊ မြေပုံတွေကလည်း ထပ်လို့တိုးလို့၊ မြေပုံကိုရှာလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ပိုလို့တောင်မှ ကြေကွဲမိရပါသေးသည်။ စိတ်မှန်းနဲ့ပဲ သားတွေ သမီးတွေမြေးတွေက လက်အုပ်ချီပြီးကန်တော့ကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဗျာဆရာ ခရမ်းပြာမြင်း ရိုင်းကြီးကတော့ သူ့ရဲ့အဖေ စစ်သားဟောင်းကြီး မျက်ကွယ်ပြုသွားရင် မြှုပ်နှံထားမယ့်နေရာမှာ မှတ်တိုင်စိုက်ပြီး ဒီလိုထိုး ထားချင်ပါသတဲ့ … ။
”ဒီနေရာမှာ ကဗျာဆရာရဲ့အဖေ စစ်သားဟောင်းကြီး လဲလျောင်းနေသည်” ….
ကျွန်တော်ကရော အဖေ့မြေပုံထိပ်မှာ ”ဒီနေရာမှာ ကဗျာဆရာရဲ့အဖေ ပန်းပဲဆရာကြီး အိပ်စက်အနားယူနေသည်” လို့ ကမ္ပည်းမှတ်တိုင်လေး စိုက်ထူခဲ့ဖို့ ဘာဖြစ်လို့များ မေ့လျော့နေခဲ့ရတာပါလိမ့်။ အဲဒီတုန်းက သောကနဲ့ ကျပ်ထုပ်ထိုးထားတဲ့ညနေရီမှာမဟုတ်လား။
[၁၂-၁-၂၀၀၆ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားသော အဖေသို့ …]
အောင်လွန်းမြိုင် –အောင် ဆ န်း(0)